Thwebula Hearthstone 1.12.1.2528 – Windows – Vessoft
Hearthstone – umdlalo othandwayo esekelwe umkhathi Warcraft by isiphepho esikhulu seqhwa Entertainment. Lo mdlalo iqukethe game izindlela ezehlukene ezifana ukuqeqesha, duel onobungane, imincintiswano enkundleni, ngxabano nezinye abadlali kanye empini nge abaphathi. Hearthstone abadlali ashintshana alingise emakhadi bomkhumbi oluqoqwe of uMuntu ekhethiwe futhi usebenzise ahlukahlukene iziphonso, amakhono noma izikhali of heroes ukuze kuzuzwe ekunqobeni. Lo mdlalo iqukethe amakhadi eziyivelakancane futhi enamandla ukuthi ingatholakala for iqhaza imincintiswano futhi ngokusebenzisa ukuthengwa amaqoqo ezehlukene amakhadi. Hearthstone futhi sikwazi disenchant amakhadi ezingafuneki for ukuthola uthuli magic okuyinto esetshenziswa ukudala amakhadi amasha.
Ukukhetha enkulu muntu
Amathuba Wide of inqubo lokudlala
Different game izindlela
English, Afrikaans, Українська, Français... Babylon 10.5.0.15